WatchOS 1 uye tvOS 4.3.1 beta 11.4 yakagadzirira vanogadzira | Ndinobva mac
Apple haimire nekutanga kwe beta shanduro uye vagadziri vatove neshanduro dzinowanikwa kurodha pasi beta 1 yewatchOS 4.3.1 uye tvOS 11.4. Iko hakuna kumira kunogoneka mune izvi uye beta shanduro dzakakosha kuApple nevashandisi vayo.
Mune idzi nyowani beta vhezheni dzakaburitswa, iyo beta vhezheni 1 ye macOS haina kuwanikwa, iyo ndinovimba inosvika mumaoko evagadziri nhasi. Chero zvazvingaitika, zvakanaka kuti urambe uchiona chiitiko mushure mevashanduro zviri pamutemo uye ichi chinhu chakashandiswa naApple.
Vagadziri vacho vanove vari pamusoro pekuchengetera idzi shanduro nyowani asi musimboti zvinoita sekunge tine nhau maererano nekusimba uye kuchengetedzeka kwesystem, kuvandudzwa mukuita uye mashoma mashoma mabasa musystem.
Ichokwadi ndechekuti chinhu chakakosha mune idzi dzese shanduro hachisati chauya kuWWDC munaJune chakaziviswa nekambani, asi hapana tarisiro yakawandisa maererano nenhau kubvira Apple yatotaura kuti yaizotarisa pane OS kugadzirisa kugadzirisa matambudziko, asi zviripachena tichava nezvimwe zvitsva mukushanda uye zvirokwazvo pakupedzisira vachazotishamisa neshanduko mukushanda kwavo. Apple inotevera gwara rayo remugwagwa uye isu tiri pachena kuti shanduko hadzizonyanyo kuve dzakakosha mune idzi dzinotevera shanduro dzatisati taona, asi dzichagara dzichinatsiridza nekugadzirisa matambudziko akaonekwa mavari, chimwe chinhu pasina mubvunzo chinokosheswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » WatchOS 1 uye tvOS 4.3.1 beta 11.4 yakagadzirira vanogadzira
Mhedzisiro yemari yeApple yeQ2 2018 ichaunzwa muna Chivabvu 1